Miyuu Matthijs de Ligt si dadban u xaqiijiyay inuu kusii jeedo Man United? Ficil uu ka sameeyay baraha bulshada oo saameyn badan abuuray. – Gool FM
Miyuu Matthijs de Ligt si dadban u xaqiijiyay inuu kusii jeedo Man United? Ficil uu ka sameeyay baraha bulshada oo saameyn badan abuuray.
Abdirashid Mohamud May 25, 2019
(Manchester) 25 Maajo 2019. Da’yarka Ajax Matthijs de Ligt ayaa gilgilaya suuqa kala iibsiga ciyaartoyda mana u muuqdo mid kusii nagaanaya kooxdiisa, sidaas darteed wuxuu inyar kiciyay xiisadda baraha bulshada kadib markii uu ficil sahlan ka sameeyay Instagram-ka.
Dhibaatada jirta waxey tahay ilaa iyo hadda lama oga meesha uu ku dambeyn doono, balse waa hubaal iney aad ugu raad joogaan kooxaha waaweyn ee qaaradda yurub.
Barcelona ayaa wali la leeyahay waa kooxda ugu cad-cad, kooxda difaacaneysa La Liga ayaana durba dhameysay saxiixa Frenkie de Jong oo saaxiib fiican la ah Matthijs de Light, warar ka imaanaya Spain ayaana sidoo kale qiraya in Minio Riola iyo maamulka Barcelona ay wada hadleen walow aan la ogeyn hadii ay wax isla meel dhigeen.
Dhanka kale Liverpool ayaa ah koox kale oo dooneysa iney hesho xiddigaan si ay ula mataaneyso Virgil van Dijk oo wacdaro ka dhigay fasalkii dhamaaday Premier League.
Si kastaba wax cajiib ah ayuu sameeyay da’yarka, wuxuuna farxad galiyay jamaahiirta Man United maadaama uu (like) ama (ka helid) saaray sawir uu soo dhigay Rio Ferdinand, walow sawirka uu yahay mid hore oo muujinaya guushii koobka Champions League ee 2008.
Haatan falcelinta iyo tallaabooyinka baraha bulshada waxey u muuqdaan kuwa isku soo dhaweynaya xaalado laga yaabo iney kala fog yahiin, sidaas darteed jamaahiirta Red Devils waxey aaminsan yahiin in arrinta De Ligt ay tahay sheeko macquul ah.
Waa maxay sababta ay Arsenal u jeclaan laheyd in Matthijs de Ligt uu ku biiro Barcelona? Xog qarsoon oo la baahiyay.
Vicente del Bosque oo kashifay in Nicolas Anelka uu sabab layaab leh tababarka Real Madrid ugu gooyay laba maalmood - muxuu tabanayay?